သင့်ကား ဆီစားနှုန်း ဘာကြောင့် များနေတာလဲ? | CarsDB
သင့်ကား ဆီစားနှုန်း ဘာကြောင့် များနေတာလဲ?
လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့ ယနေ့ခေတ်အခါမှာ “ဒီကားက အင်ဂျင်ပါဝါကြီးတယ်ကွ၊ ဆီပိုအုပ်တယ်၊ ဆီပိုတုပ်တယ်"။ "ဒီကားတော့ သွားမလုပ်နဲ့ဟ၊ ဟိုးနားဒီနားကို ဆီတစ်ဂါလံ" ဆိုတာမျိုးက ကျနော်တို့ကားလောကပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေကျစကားတွေပါ။ ဒီ ဆီစားတယ်၊ ဆီစားတာများတယ် အစရှိတဲ့ စကားတွေက ဒီမှာမှမဟုတ်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ကားလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပါ အမြဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။
ဟိုးအရင် ဆီစားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်မှုနည်းတဲ့ နည်းပညာနိမ့်ကားအင်ဂျင်တွေကနေ ကနေ့ခေတ် ဆီစားနှုန်းကို စနစ်တကျကွန်ပျူတာနည်းပညာများနဲ့ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ EFI အင်ဂျင်တွေ၊ နောက် အင်ဂျင်နဲ့ High Voltage Battery တွေ တွဲဖက်အသုံးပြုလာတဲ့ Hybrid System တွေအထိ ခေတ်အဆက်ဆက် နည်းပညာတွေ မြင့်မားတိုးတက်လာကြပါပြီ။
ကားလောကမှာ အင်ဂျင်ပါဝါကြီးလေလေ၊ ဆီစားများလေလေဆိုတာကတော့ ကားစီးတဲ့သူတိုင်း သိထားပြီးသားအချက်ပါ။ 3.5 litre Engine ၊ 4.5 litre Engine တွေနဲ့ 1.0 litre ၊ 1.3 litre ၊ 1.5 litre Engine တွေရဲ့ ဆီစားနှုန်းက ကွဲပြားခြားနားသလို၊ အင်ဂျင်ရဲ့မောင်းနှင်အား၊ အဆွဲအရုန်း၊ အတွင်းခန်း အဲကွန်းအအေးပေးစနစ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေဟာလည်း ကွာခြားမှာပါ။
ဒါကြောင့် စီးပွားရေးဈေးကွက်အရ ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်သုံးမယ့်ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းဆိုတာ ကားလောကထဲမှာ အရေးပါဆုံးသော အရာတွေထဲက တစ်ခုဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကားလောကထဲမှာ အပြောများဆုံး၊ အဖြစ်များဆုံး၊ နေ့စဉ် ငွေယိုပေါက် အများဆုံး ပြဿနာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆီစားနှုန်းများစေတဲ့ ပြဿနာလေးတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါက ကြီးတယ်၊ ဥပမာ Celsior ကား၊ အင်ဂျင်ပါဝါကြီးတဲ့ UZ အင်ဂျင်တွေ၊ ပုံမှန်ကားတွေထက် ဆီပိုစားမယ်။ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်နေကျပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ကားက Belta 1.0 litre အင်ဂျင်နဲ့။ ဒါပေမယ့် 1.0 litre Engine နဲ့ မလိုက်အောင်ကို ဆီစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပြီ။
ကားဆီပိုစားရခြင်း အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁။ ဆီအရည်အသွေး မပြည့်မီခြင်း
ကျနော်တို့ လက်ရှိကားလောကဈေးကွက်မှာ သုံးစွဲနေတဲ့ဆီတွေက ဓာတ်ဆီဆို 92 ၊ 95 RON ၊ ဒီဇယ်ဆို ရိုးရိုးဒီဇယ်၊ ပရီမီယမ် ဒီဇယ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆီတွေရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ကားတစ်စီးရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်ရှိသုံးနေကျကားတွေအားလုံးရဲ့ အင်ဂျင်တွေဟာ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး စွမ်းအင်ရကာ လည်ပတ်ရတဲ့ Internal Combustion Engine မလို့ပါပဲ။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဆိုရင် အင်ဂျင်လည်ပတ်ဖို့ ဆီနဲ့လေကို မီးလောင်ခန်းထဲဆွဲသွင်း၊ piston ကဖိသိပ်ပြီး spark plugs တွေကနေ မီးခတ်ကာ လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်တဲ့ အင်ဂျင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အခြေအနေမှာ 92 ၊ 95 အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ ဆီတွေဟာ အဖိအသိပ်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် spark plugs ကနေ မီးခတ်ချိန်ထိတောင် မရောက်လိုက်ဘဲ ဖိသိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အလိုလို မီးထလောင်ကျွမ်းကုန်ပါတော့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အင်ဂျင်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေ အပြည့်အဝမရရှိတော့ဘဲ ဆီဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ကာ ဆီစားများရတဲ့ ပြဿနာကြုံလာရပါတော့တယ်။
၂။ Spark plugs တွေ မကောင်းခြင်း
ဆီစားများစေတဲ့ နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုက spark plugs တွေ မကောင်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အရည်အသွေးညံ့တဲ့ အမျိုးအစားတွေသုံးထားတာ၊ အင်ဂျင်အမျိုးအစားနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ spark plugs တွေ သုံးထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Spark plugs ဆိုတာကလည်း အပေါ်မှာ ပြောပြထားသလို လက်ရှိကားတွေမှာသုံးနေတဲ့ အင်ဂျင်တွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ ဇာတ်ကောင်ပါ။ ဒီကောင် ကောင်/းမကောင်း ၊ အရည်အသွေးမှန်/မမှန် ၊ အင်ဂျင်အမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိဟာလည်း ကားဆီစားနှုန်းကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
Spark plugs တွေမကောင်းဘူးဆိုရင် အင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ခန်းထဲကို ပို့သွင်းလိုက်တဲ့ ဆီတွေဟာ၊ ပြည့်ပြည့်ဝဝ လောင်ကျွမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို မလောင်ကျွမ်းတဲ့အတွက် ပို့သွင်းလိုက်တဲ့ ဆီတွေဟာ အလဟဿ ဖြစ်ကုန်မယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဆီတွေ အပြည့်အဝ မီးမလောင်တဲ့အတွက် အင်ဂျင်လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါကိုလည်း အပြည့်အဝရစေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင့်ကားမှာသုံးနေတဲ့ spark plugs တွေကို ကီလိုမီတာ 30,000 လောက်မောင်းပြီးတိုင်း ဖြုတ်ပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကြံပြုချင်တာကတော့ ကားအင်ဂျင်အမျိုးအစားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ တွေ့ကရာ spark plugs တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာကလည်း ဆီပိုစားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။
တချို့ကားအသုံးပြုသူတွေဆိုရင် ကား spark plugs တွေကို ဖြုတ်စစ်ဆေးတာ၊ လဲလှယ်တာတွေ မလုပ်ဘဲ ပေပြီးသုံးလို့ နောက်ဆုံး Engine Check Light တွေလင်းပြီး misfire diagnostics code တွေတက်လာတာမျိုးအထိဖြစ်လာတွေ တွေ့ရဖူးပါတယ်။
၃။ Air filter တွေမကောင်းတာ၊ လေတံခါး (throttle body) ကြေးပိတ်တာ
ဆီစားများစေတဲ့ အချက်တွေထဲက မြင်ရတွေ့ရ အများဆုံးအကြောင်းတစ်ခုက အင်ဂျင်ခန်းထဲက air filter တွေမကောင်းတာပါ။ လေစစ်လို့အလွယ်ခေါ်တတ်ကြတဲ့ air filter တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို နေရာအနှံ့ သဲဖုန်ထူထပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အလွယ်တကူ လျင်လျင်မြန်မြန် ညစ်ပတ်သွားပါတယ်။ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ မိုင် ၁၅,၀၀၀ ခွဲကနေ မိုင် ၃၀,၀၀၀ မောင်းပြီးတိုင်း လေစစ်ကို လဲလှယ်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပေးထားပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒါ့ထက်စောပြီး လဲလှယ်သင့်တာပါ။
Air filter ကတော့ spark plugs လို ဖြုတ်တပ်ရ မခက်ခဲဘဲ အလွယ်တကူဖြုတ်စစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲလှယ်နိုင်တာမလို့ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ဖြုတ်စစ်ကာ မကောင်းရင်လဲလှယ်ပေးပါက ဆီစားများစေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
Air filter မကောင်းရင် ဘာလို့ဆီစားရသလဲဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကားတိုင်းရဲ့ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းမှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး စွမ်းအင်ရရှိဖို့ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဆီ၊ လေနဲ့ မီးပွားထဲမှာ လေရဲ့အပိုင်းကို ဒီ air filter ကနေဖြတ်သန်းပြီးမှ လာရတာကြောင့်ပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် လေနဲ့ဆီ အချိုးကို 14း1 လို့သတ်မှတ်ထားပြီး လေစစ်တွေမှာ ကြေးနဲ့ဖုန်တွေကပ်ပြီး ပိတ်ဆို့နေတဲ့အခါမှာ ဆီနဲ့လေ အချိုးအစားတွေ မမှန်တော့ဘဲ မီးလောင်ခန်းထဲမှာ လေအချိုးနည်းပြီး ဆီတွေမီးကုန်အောင် မလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ဆီစားများရတဲ့ ပြဿနာကြုံရတာပါပဲ။ လေတံခါးမှာ ကြေးတွေပိတ်ဆို့တဲ့အခါမှာလည်း အပေါ်မှာပြောထားသလို ဆီနဲ့လေအချိုးမညီမျှတာ၊ အင်ဂျင်တုန်ခါတာတွေအထိပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ Oxygen sensors တွေ မကောင်းတာ
ဒါကတော့ ဆီစားများစေတဲ့ အချက်တွေထဲက အသိသာဆုံးအချက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ oxygen sensors တွေမကောင်းဘူးဆိုရင် Engien Check Light အချက်ပြလာလို့ပါပဲ။
Oxygen sensors ကို အင်ဂျင်ရဲ့ အိတ်ဇောအထွက်တွေမှာ တပ်ဆင်ထားပြီး အိတ်ဇောကနေ ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးတွေထဲက Oxygen နဲ့ အခြားဓာတ်ငွေ့တွေကို အာရုံခံကာ Engine Control Module လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာဘောက်ကို သတင်းလှမ်းပို့ပါတယ်။ အဲဒီအိတ်ဇောငွေ့တွေထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ချက်ထက်များနေလား၊ နည်းနေလားဆိုတာကို ကွန်ပျူတာဘောက်ကိုပို့ပေးခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာဘောက်ကနေတစ်ဆင့် ဆီများနေရင် ဆီပို့တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချ၊ လေများနေရင် လေလျှော့ အစရှိသည်ဖြင့် လိုတိုး ပိုလျှော့လုပ်ပြီး ဆီစားသက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီ Oxygen sensor ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဖြင့် ကွန်ပျူတာဘောက်ကနေ သတင်းအချက်အလက် ဘာမှမရတော့ဘဲ Engine Check မီးလင်းစေတာပါ။ ဒီအောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာကို မပြုပြင် မလဲလှယ်ဘဲ ဒီအတိုင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဆီလေ အချိုးမမှန်တာတွေကို မသိနိုင်တော့ဘဲ ဆီစားနှုန်းမြင့်တက်လာမယ်ဆိုတာ မလွဲမသွေပါပဲ။
၅။ Fuel injector တွေ မကောင်းတာ
Fuel injector တွေမကောင်းတာ၊ အဓိကအားဖြင့် ဆီကျများတဲ့ ပြဿနာကြောင့်လည်း ဆီစားနှုန်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ Fuel injector ဆိုတာကတော့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမယ့် အင်ဂျင်ခန်းထဲကို ဆီပန်းထည့်ပေးရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေအတွက်တော့ nozzle လို့ခေါ်ကြပြီး ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေအတွက်တော့ injector လို.ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီ ဆီပန်းပေးတဲ့ injector တွေမကောင်းဘူးဆိုရင် ကွန်ပျူတာဘောက်က ပို့ပေးတဲ့အချက်အလက်အရ ပန်းသွင်းပေးရမယ့် ဆီပမာဏထက် ဆီတွေပိုပန်း၊ ပိုထွက်တဲ့ ပြဿနာကြုံရမှာပါ။
ဒါကြောင့် မီးလောင်ခန်းထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ ဆီတွေပိုဖြန်းပြီး အကုန်မလောင်ကျွမ်းဘဲ သင့်ကား ဆီသိသိသာသာ ပိုစားလာတော့မှာပါ။ မီးလောင်ခန်းထဲ ဆီအကျများလွန်းတာ၊ ဆီအကျနည်းလွန်းတာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ Engine Check မီး လင်းလာတတ်ပြီး diagnostic error code တွေ တက်လာတော့မှာပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ injector တွေကို ဖြုတ်ပြီး ဆေးကျောတာ၊ အသစ်လဲလှယ်တာတွေလုပ်ရတော့မှာပါ။
၆။ အင်ဂျင်ဝိုင် grade မမှန်တာတွေသုံးတာ
ဒါကတော့ ဆီပိုစားစေတဲ့ ပြဿနာတွေထဲက ရာခိုင်နှုန်းနည်းတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဆီစားနှုန်းနဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းတွေကို သုတေသနလုပ် စောင့်ကြည့်ကာ ဆီစားနှုန်းသက်သာပြီး စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ အင်ဂျင်တွေကိုဖန်တီးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ အင်ဂျင်လိုအပ်တာထက် ပိုစေးပြစ်တဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင် အမျိုးအစားတွေကိုသုံးမယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင် အရည်အသွေးညံ့တာတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်း ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှေးကွေးစေပြီး ဆီပိုစားတဲ့ ပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ချောဆီအမျိုးအစားနဲ့ အင်ဂျင်သက်တမ်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ grade ကိုသာသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
၇ ။ တာယာလေပေါင်ချိန်မမှန်တာ
ဒီအချက်ကတော့ လူသိနည်းတဲ့ ဆီစားနှုန်းမြင့်မားစေတဲ့ အချက်ပါ။ တချို့ကားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အဆိုအရဆိုရင် တာယာလေပေါင်ချိန် မမှန်တာကြောင့် ဆီစားနှုန်း 5% အထိတောင်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နောက် ဆိုက်မမှန်တဲ့ တာယာတွေကို သုံးစွဲတာကလည်း ဆီစားနှုန်းကို မြင့်တတ်စေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားတာယာလေပေါင် pressure အလျှော့အတင်းကိုလည်း ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
၈။ ခြေဖျားအပေါ်မှာ မူတည်တာ
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကားလောကထဲက old service လို့ပြောပြောနေကြတဲ့ သက်တမ်းရင့် ကားဆရာကြီးတွေပြောသလိုပါပဲ။ "ကားဆီစားတယ်ဆိုတာ ခြေဖျားပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကွ" ဆိုသလိုပါ။ ကားမောင်းတဲ့အခါ မလိုအပ်ဘဲ (accelerator pedal) လီဘာကို စောင့်နင်းတာ၊ အတင်းကျော်တက်တာတွေကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ လီဘာပိုနင်းရတာတွေဖြစ်လာပြီး ဆီစားနှုန်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန် ဆိုသလို၊ ကားရဲ့ အဆွဲအရုန်း ဂီယာ အချိန်းအပြုကို သတိပြုပြီး လီဘာနင်းမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဆီစားနှုန်းကလည်း ပိုပြီးသက်သာလာမှာပါ။
အထက်ပါ အချက်တွေကတော့ လက်ရှိအဖြစ်များဆုံး ဆီပိုစားစေတဲ့ ပြဿနာရပ်တွေဖြစ်ပြီး အကြောင်းအချက် တစ်ချက်တည်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးဖြစ်စေ ဆီစားနှုန်းမြင့်တက်လာစေတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သွားလာနေကျ လမ်းကြောင်းမှာ သုံးရတဲ့ဆီပမာဏထက် ဆီစားနှုန်းတွေ သိသိသာသာမြင့်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး Engine Tuning (အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆီလေမီး အချိုးတွေ ချိန်ညှိတာ) ကို ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ ပြသစစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့ ယနေ့ခေတ်ထဲမှာ မိတ်ဆွေတို့ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ ကားဆီစားနှုန်းမလိုအပ်ဘဲ မြင့်လာတယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် သေချာဂရုပြုပြီး အမြဲစစ်ဆေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။
စာရေးသူ : Lynn Za Nee ( P.T.U)
လောငျစာဆီ ဈေးနှုနျးတဖွညျးဖွညျးမွငျ့တကျလာတဲ့ ယနခေ့တျေအခါမှာ “ဒီကားက အငျဂငျြပါဝါကွီးတယျကှ၊ ဆီပိုအုပျတယျ၊ ဆီပိုတုပျတယျ"။ "ဒီကားတော့ သှားမလုပျနဲ့ဟ၊ ဟိုးနားဒီနားကို ဆီတဈဂါလံ" ဆိုတာမြိုးက ကနြျောတို့ကားလောကပတျဝနျးကငျြမှာ ကွားနကေစြကားတှပေါ။ ဒီ ဆီစားတယျ၊ ဆီစားတာမြားတယျ အစရှိတဲ့ စကားတှကေ ဒီမှာမှမဟုတျ၊ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက ကားလုပျငနျးရှငျတှေ၊ ကားထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှပေါ အမွဲရငျဆိုငျနရေတဲ့ စိနျချေါမှုတှထေဲက တဈခုပါ။
ဟိုးအရငျ ဆီစားနှုနျးကိုထိနျးခြုပျမှုနညျးတဲ့ နညျးပညာနိမျ့ကားအငျဂငျြတှကေနေ ကနခေ့တျေ ဆီစားနှုနျးကို စနဈတကကြှနျပြူတာနညျးပညာမြားနဲ့ စောငျ့ကွညျ့ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ EFI အငျဂငျြတှေ၊ နောကျ အငျဂငျြနဲ့ High Voltage Battery တှေ တှဲဖကျအသုံးပွုလာတဲ့ Hybrid System တှအေထိ ခတျေအဆကျဆကျ နညျးပညာတှေ မွငျ့မားတိုးတကျလာကွပါပွီ။
ကားလောကမှာ အငျဂငျြပါဝါကွီးလလေေ၊ ဆီစားမြားလလေဆေိုတာကတော့ ကားစီးတဲ့သူတိုငျး သိထားပွီးသားအခကျြပါ။ 3.5 litre Engine ၊ 4.5 litre Engine တှနေဲ့ 1.0 litre ၊ 1.3 litre ၊ 1.5 litre Engine တှရေဲ့ ဆီစားနှုနျးက ကှဲပွားခွားနားသလို၊ အငျဂငျြရဲ့မောငျးနှငျအား၊ အဆှဲအရုနျး၊ အတှငျးခနျး အဲကှနျးအအေးပေးစနဈတှရေဲ့ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးတှဟောလညျး ကှာခွားမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ စီးပှားရေးဈေးကှကျအရ ကားတဈစီးဝယျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျသုံးမယျ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုနျးဆိုတာ ကားလောကထဲမှာ အရေးပါဆုံးသော အရာတှထေဲက တဈခုဆိုရငျ မမှားပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ ကားလောကထဲမှာ အပွောမြားဆုံး၊ အဖွဈမြားဆုံး၊ နစေ့ဉျ ငှယေိုပေါကျ အမြားဆုံး ပွဿနာတှထေဲကတဈခုဖွဈတဲ့ ဆီစားနှုနျးမြားစတေဲ့ ပွဿနာလေးတှကေို ဆှေးနှေးတငျပွခငျြပါတယျ။
ကိုယျဝယျထားတဲ့ကားရဲ့ အငျဂငျြပါဝါက ကွီးတယျ၊ ဥပမာ Celsior ကား၊ အငျဂငျြပါဝါကွီးတဲ့ UZ အငျဂငျြတှေ၊ ပုံမှနျကားတှထေကျ ဆီပိုစားမယျ။ ဒါက ပုံမှနျဖွဈနကေပြဲ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျဝယျထားတဲ့ ကားက Belta 1.0 litre အငျဂငျြနဲ့။ ဒါပမေယျ့ 1.0 litre Engine နဲ့ မလိုကျအောငျကို ဆီစားနတေယျဆိုရငျတော့ ပွဿနာတဈခုခုရှိနပွေီ။
ကားဆီပိုစားရခွငျး အကွောငျးအခကျြတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁။ ဆီအရညျအသှေး မပွညျ့မီခွငျး
ကနြျောတို့ လကျရှိကားလောကဈေးကှကျမှာ သုံးစှဲနတေဲ့ဆီတှကေ ဓာတျဆီဆို 92 ၊ 95 RON ၊ ဒီဇယျဆို ရိုးရိုးဒီဇယျ၊ ပရီမီယမျ ဒီဇယျ တို့ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီဆီတှရေဲ့ အရညျအသှေးဟာ ကားတဈစီးရဲ့ ဆီစားနှုနျးကို တိုကျရိုကျဆကျစပျမှုရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ကနြျောတို့ လကျရှိသုံးနကေကြားတှအေားလုံးရဲ့ အငျဂငျြတှဟော အတှငျးပိုငျးမီးလောငျပေါကျကှဲပွီး စှမျးအငျရကာ လညျပတျရတဲ့ Internal Combustion Engine မလို့ပါပဲ။ ဓာတျဆီအငျဂငျြဆိုရငျ အငျဂငျြလညျပတျဖို့ ဆီနဲ့လကေို မီးလောငျခနျးထဲဆှဲသှငျး၊ piston ကဖိသိပျပွီး spark plugs တှကေနေ မီးခတျကာ လောငျကြှမျးပေါကျကှဲစှမျးအငျထုတျလုပျတဲ့ အငျဂငျြတှဖွေဈပါတယျ။
အဲဒီလို အခွအေနမှော 92 ၊ 95 အရညျအသှေးမပွညျ့မီတဲ့ ဆီတှဟော အဖိအသိပျမခံနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ spark plugs ကနေ မီးခတျခြိနျထိတောငျ မရောကျလိုကျဘဲ ဖိသိပျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အလိုလို မီးထလောငျကြှမျးကုနျပါတော့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အငျဂငျြရဲ့ လိုအပျတဲ့ စှမျးအငျတှေ အပွညျ့အဝမရရှိတော့ဘဲ ဆီဆုံးရှုံးမှုတှဖွေဈကာ ဆီစားမြားရတဲ့ ပွဿနာကွုံလာရပါတော့တယျ။
၂။ Spark plugs တှေ မကောငျးခွငျး
ဆီစားမြားစတေဲ့ နောကျအကွောငျးအရာတဈခုက spark plugs တှေ မကောငျးတာ၊ ဒါမှမဟုတျ အရညျအသှေးညံ့တဲ့ အမြိုးအစားတှသေုံးထားတာ၊ အငျဂငျြအမြိုးအစားနဲ့ မကိုကျညီတဲ့ spark plugs တှေ သုံးထားတာကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ Spark plugs ဆိုတာကလညျး အပျေါမှာ ပွောပွထားသလို လကျရှိကားတှမှောသုံးနတေဲ့ အငျဂငျြတှအေတှကျ မရှိမဖွဈ အရေးကွီးတဲ့ ဇာတျကောငျပါ။ ဒီကောငျ ကောငျ/းမကောငျး ၊ အရညျအသှေးမှနျ/မမှနျ ၊ အငျဂငျြအမြိုးအစားနဲ့ ကိုကျညီမှုရှိ/မရှိဟာလညျး ကားဆီစားနှုနျးကို တိုကျရိုကျသကျဆိုငျနပေါတယျ။
Spark plugs တှမေကောငျးဘူးဆိုရငျ အငျဂငျြရဲ့ မီးလောငျခနျးထဲကို ပို့သှငျးလိုကျတဲ့ ဆီတှဟော၊ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ လောငျကြှမျးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလို မလောငျကြှမျးတဲ့အတှကျ ပို့သှငျးလိုကျတဲ့ ဆီတှဟော အလဟဿ ဖွဈကုနျမယျ။ နောကျတဈခကျြက ဆီတှေ အပွညျ့အဝ မီးမလောငျတဲ့အတှကျ အငျဂငျြလညျပတျဖို့ လိုအပျတဲ့ အငျဂငျြပါဝါကိုလညျး အပွညျ့အဝရစမှော မဟုတျတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ သငျ့ကားမှာသုံးနတေဲ့ spark plugs တှကေို ကီလိုမီတာ 30,000 လောကျမောငျးပွီးတိုငျး ဖွုတျပွီး စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ နောကျထပျအကွံပွုခငျြတာကတော့ ကားအငျဂငျြအမြိုးအစားနဲ့မကိုကျညီတဲ့ တှကေ့ရာ spark plugs တှကေို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုတာကလညျး ဆီပိုစားစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုပါ။
တခြို့ကားအသုံးပွုသူတှဆေိုရငျ ကား spark plugs တှကေို ဖွုတျစဈဆေးတာ၊ လဲလှယျတာတှေ မလုပျဘဲ ပပွေီးသုံးလို့ နောကျဆုံး Engine Check Light တှလေငျးပွီး misfire diagnostics code တှတေကျလာတာမြိုးအထိဖွဈလာတှေ တှရေ့ဖူးပါတယျ။
၃။ Air filter တှမေကောငျးတာ၊ လတေံခါး (throttle body) ကွေးပိတျတာ
ဆီစားမြားစတေဲ့ အခကျြတှထေဲက မွငျရတှရေ့ အမြားဆုံးအကွောငျးတဈခုက အငျဂငျြခနျးထဲက air filter တှမေကောငျးတာပါ။ လစေဈလို့အလှယျချေါတတျကွတဲ့ air filter တှဟော မွနျမာနိုငျငံလို နရောအနှံ့ သဲဖုနျထူထပျတဲ့ နရောတှမှော အလှယျတကူ လငျြလငျြမွနျမွနျ ညဈပတျသှားပါတယျ။ ကားထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေတော့ မိုငျ ၁၅,၀၀၀ ခှဲကနေ မိုငျ ၃၀,၀၀၀ မောငျးပွီးတိုငျး လစေဈကို လဲလှယျသငျ့ပါတယျလို့ အကွံပေးထားပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ဒါ့ထကျစောပွီး လဲလှယျသငျ့တာပါ။
Air filter ကတော့ spark plugs လို ဖွုတျတပျရ မခကျခဲဘဲ အလှယျတကူဖွုတျစဈပွီး ကိုယျတိုငျလဲလှယျနိုငျတာမလို့ အပတျစဉျ၊ လစဉျ ဖွုတျစဈကာ မကောငျးရငျလဲလှယျပေးပါက ဆီစားမြားစတေဲ့ အကွောငျးတှထေဲကတဈခုကို ကာကှယျနိုငျမှာပါ။
Air filter မကောငျးရငျ ဘာလို့ဆီစားရသလဲဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့လကျရှိသုံးနတေဲ့ကားတိုငျးရဲ့ အငျဂငျြအတှငျးပိုငျးမှာ မီးလောငျပေါကျကှဲပွီး စှမျးအငျရရှိဖို့ အဓိကလိုအပျခကျြဖွဈတဲ့ ဆီ၊ လနေဲ့ မီးပှားထဲမှာ လရေဲ့အပိုငျးကို ဒီ air filter ကနဖွေတျသနျးပွီးမှ လာရတာကွောငျ့ပါပဲ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ လနေဲ့ဆီ အခြိုးကို 14း1 လို့သတျမှတျထားပွီး လစေဈတှမှော ကွေးနဲ့ဖုနျတှကေပျပွီး ပိတျဆို့နတေဲ့အခါမှာ ဆီနဲ့လေ အခြိုးအစားတှေ မမှနျတော့ဘဲ မီးလောငျခနျးထဲမှာ လအေခြိုးနညျးပွီး ဆီတှမေီးကုနျအောငျ မလောငျကြှမျးနိုငျတဲ့အတှကျ ဆီစားမြားရတဲ့ ပွဿနာကွုံရတာပါပဲ။ လတေံခါးမှာ ကွေးတှပေိတျဆို့တဲ့အခါမှာလညျး အပျေါမှာပွောထားသလို ဆီနဲ့လအေခြိုးမညီမြှတာ၊ အငျဂငျြတုနျခါတာတှအေထိပါဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
၄။ Oxygen sensors တှေ မကောငျးတာ
ဒါကတော့ ဆီစားမြားစတေဲ့ အခကျြတှထေဲက အသိသာဆုံးအခကျြပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ oxygen sensors တှမေကောငျးဘူးဆိုရငျ Engien Check Light အခကျြပွလာလို့ပါပဲ။
Oxygen sensors ကို အငျဂငျြရဲ့ အိတျဇောအထှကျတှမှော တပျဆငျထားပွီး အိတျဇောကနေ ထှကျလာတဲ့ မီးခိုးတှထေဲက Oxygen နဲ့ အခွားဓာတျငှတှေ့ကေို အာရုံခံကာ Engine Control Module လို့ချေါတဲ့ ကှနျပြူတာဘောကျကို သတငျးလှမျးပို့ပါတယျ။ အဲဒီအိတျဇောငှတှေ့ထေဲမှာ အောကျဆီဂငျြရာခိုငျနှုနျး သတျမှတျခကျြထကျမြားနလေား၊ နညျးနလေားဆိုတာကို ကှနျပြူတာဘောကျကိုပို့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ ကှနျပြူတာဘောကျကနတေဈဆငျ့ ဆီမြားနရေငျ ဆီပို့တဲ့ ရာခိုငျနှုနျးလြှော့ခြ၊ လမြေားနရေငျ လလြှေော့ အစရှိသညျဖွငျ့ လိုတိုး ပိုလြှော့လုပျပွီး ဆီစားသကျသာအောငျ ပွုလုပျပေးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီ Oxygen sensor ပကျြစီးသှားပွီဆိုရငျဖွငျ့ ကှနျပြူတာဘောကျကနေ သတငျးအခကျြအလကျ ဘာမှမရတော့ဘဲ Engine Check မီးလငျးစတောပါ။ ဒီအောကျဆီဂငျြဆနျဆာကို မပွုပွငျ မလဲလှယျဘဲ ဒီအတိုငျးသုံးနမေယျဆိုရငျဖွငျ့ ဆီလေ အခြိုးမမှနျတာတှကေို မသိနိုငျတော့ဘဲ ဆီစားနှုနျးမွငျ့တကျလာမယျဆိုတာ မလှဲမသှပေါပဲ။
၅။ Fuel injector တှေ မကောငျးတာ
Fuel injector တှမေကောငျးတာ၊ အဓိကအားဖွငျ့ ဆီကမြားတဲ့ ပွဿနာကွောငျ့လညျး ဆီစားနှုနျးမွငျ့တကျစပေါတယျ။ Fuel injector ဆိုတာကတော့ မီးလောငျပေါကျကှဲမယျ့ အငျဂငျြခနျးထဲကို ဆီပနျးထညျ့ပေးရတဲ့ ပစ်စညျးတဈမြိုးပါ။ ဒီဇယျအငျဂငျြတှအေတှကျတော့ nozzle လို့ချေါကွပွီး ဓာတျဆီအငျဂငျြတှအေတှကျတော့ injector လို.ချေါကွပါတယျ။ ဒီ ဆီပနျးပေးတဲ့ injector တှမေကောငျးဘူးဆိုရငျ ကှနျပြူတာဘောကျက ပို့ပေးတဲ့အခကျြအလကျအရ ပနျးသှငျးပေးရမယျ့ ဆီပမာဏထကျ ဆီတှပေိုပနျး၊ ပိုထှကျတဲ့ ပွဿနာကွုံရမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ မီးလောငျခနျးထဲမှာ မလိုအပျတဲ့ ဆီတှပေိုဖွနျးပွီး အကုနျမလောငျကြှမျးဘဲ သငျ့ကား ဆီသိသိသာသာ ပိုစားလာတော့မှာပါ။ မီးလောငျခနျးထဲ ဆီအကမြားလှနျးတာ၊ ဆီအကနြညျးလှနျးတာတှေ ဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ Engine Check မီး လငျးလာတတျပွီး diagnostic error code တှေ တကျလာတော့မှာပါ။ အဲဒီလိုဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ injector တှကေို ဖွုတျပွီး ဆေးကြောတာ၊ အသဈလဲလှယျတာတှလေုပျရတော့မှာပါ။
၆။ အငျဂငျြဝိုငျ grade မမှနျတာတှသေုံးတာ
ဒါကတော့ ဆီပိုစားစတေဲ့ ပွဿနာတှထေဲက ရာခိုငျနှုနျးနညျးတဲ့ ပွဿနာတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ ဆီစားနှုနျးနဲ့ အငျဂငျြပိုငျးတှကေို သုတသေနလုပျ စောငျ့ကွညျ့ကာ ဆီစားနှုနျးသကျသာပွီး စှမျးရညျမွငျ့တဲ့ အငျဂငျြတှကေိုဖနျတီးတဲ့ ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ ထုတျပွနျခကျြတှအေရ အငျဂငျြလိုအပျတာထကျ ပိုစေးပွဈတဲ့ အငျဂငျြဝိုငျ အမြိုးအစားတှကေိုသုံးမယျ၊ အငျဂငျြဝိုငျ အရညျအသှေးညံ့တာတှကေိုသုံးမယျဆိုရငျ အငျဂငျြအတှငျးပိုငျး ပစ်စညျးအစိတျအပိုငျးတှရေဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေိုနှေးကှေးစပွေီး ဆီပိုစားတဲ့ ပွဿနာရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရညျအသှေးမွငျ့မားတဲ့ ခြောဆီအမြိုးအစားနဲ့ အငျဂငျြသကျတမျးနဲ့ လိုကျဖကျညီတဲ့ grade ကိုသာသုံးစှဲသငျ့ပါတယျ။
၇ ။ တာယာလပေေါငျခြိနျမမှနျတာ
ဒီအခကျြကတော့ လူသိနညျးတဲ့ ဆီစားနှုနျးမွငျ့မားစတေဲ့ အခကျြပါ။ တခြို့ကားကုမ်ပဏီတှရေဲ့ အဆိုအရဆိုရငျ တာယာလပေေါငျခြိနျ မမှနျတာကွောငျ့ ဆီစားနှုနျး 5% အထိတောငျတိုးလာနိုငျတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ နောကျ ဆိုကျမမှနျတဲ့ တာယာတှကေို သုံးစှဲတာကလညျး ဆီစားနှုနျးကို မွငျ့တတျစတေယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကားတာယာလပေေါငျ pressure အလြှော့အတငျးကိုလညျး ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။
၈။ ခွဖြေားအပျေါမှာ မူတညျတာ
နောကျဆုံးအခကျြအနနေဲ့ ပွောရရငျတော့ ကားလောကထဲက old service လို့ပွောပွောနကွေတဲ့ သကျတမျးရငျ့ ကားဆရာကွီးတှပွေောသလိုပါပဲ။ "ကားဆီစားတယျဆိုတာ ခွဖြေားပျေါမှာပဲရှိတယျကှ" ဆိုသလိုပါ။ ကားမောငျးတဲ့အခါ မလိုအပျဘဲ (accelerator pedal) လီဘာကို စောငျ့နငျးတာ၊ အတငျးကြျောတကျတာတှကွေောငျ့ မလိုအပျဘဲ လီဘာပိုနငျးရတာတှဖွေဈလာပွီး ဆီစားနှုနျးမွငျ့တကျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျရှညျသညျးခံ လမျးကွောငျးမှနျ ဆိုသလို၊ ကားရဲ့ အဆှဲအရုနျး ဂီယာ အခြိနျးအပွုကို သတိပွုပွီး လီဘာနငျးမယျဆိုရငျဖွငျ့ ဆီစားနှုနျးကလညျး ပိုပွီးသကျသာလာမှာပါ။
အထကျပါ အခကျြတှကေတော့ လကျရှိအဖွဈမြားဆုံး ဆီပိုစားစတေဲ့ ပွဿနာရပျတှဖွေဈပွီး အကွောငျးအခကျြ တဈခကျြတညျးကွောငျ့ဖွဈစေ၊ အကုနျလုံးစုပေါငျးပွီးဖွဈစေ ဆီစားနှုနျးမွငျ့တကျလာစတေတျပါတယျ။ ပုံမှနျသှားလာနကြေ လမျးကွောငျးမှာ သုံးရတဲ့ဆီပမာဏထကျ ဆီစားနှုနျးတှေ သိသိသာသာမွငျ့တကျလာပွီဆိုရငျတော့ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ အခကျြတှနေဲ့ တိုကျဆိုငျစဈဆေးနိုငျပွီး Engine Tuning (အငျဂငျြပိုငျးဆိုငျရာ ဆီလမေီး အခြိုးတှေ ခြိနျညှိတာ) ကို ကြှမျးကငျြဝပျရှော့တှမှော ပွသစဈဆေးပွီး ပွုပွငျထိနျးသိမျးရမှာဖွဈပါတယျ။
ဆီဈေးနှုနျးမွငျ့တကျနတေဲ့ ယနခေ့တျေထဲမှာ မိတျဆှတေို့ နစေ့ဉျအသုံးပွုနတေဲ့ ကားဆီစားနှုနျးမလိုအပျဘဲ မွငျ့လာတယျဆိုရငျ မိတျဆှတေို့ရဲ့ ပိုကျဆံအိတျကို ခွိမျးခွောကျတဲ့ အခွအေနဖွေဈတာကွောငျ့ သခြောဂရုပွုပွီး အမွဲစဈဆေး ပွုပွငျထိနျးသိမျးဖို့လိုအပျပါတယျလို့ အကွံပွုတငျပွလိုကျရပါတယျ။
စာဖတျသူမိတျဆှညေီအဈကို မောငျနှမအားလုံး နညျးပညာဗဟုသုတ ကွှယျဝကွပါစေ။
စာရေးသူ : Lynn Za Nee ( P.T.U)
Posted at: 07-06-2019 07:51 AM